U codee Laaciibka Afrika ee 2015 - BBC News Somali
U codee Laaciibka Afrika ee 2015
Yacini Brahimi oo ahaa ciyaartooygii guulaysatay 2014kii ayaa haddana ku biiraya ciyaartooyga Gabon ka yimid Pierre-Emerick Aubameyang, ciyaartooyga , Ghanaianka ah André Ayew, ka Senegal’ska ah Sadio Mané iyo Yaya Touré oo Ivory Coast u dhashay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan U codee Laaciibka Afrika ee 2015
Taariikh Ciyaareedka Pierre-Emerick Aubameyang
Weeraryahanka qaranka Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang waxay sanadkan u ahayd mid muhiim ah, asigoo goolal badan dhaliyay, waxa uu gaaray rekoor cusub oo gool dhalinta Jarmalka ah.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taariikh Ciyaareedka Pierre-Emerick Aubameyang
Taariikh Ciyaareedka Andre Ayew
Waa in waxbadan la sameeyaa si loola qabsado dhibaatada horyaalka Ingiriiska ee Premier league, laakiin ciyaaryahanka u dhashay Ghana ee Adre Ayew ayaa aragtidaasi ka dhigay mid aan socon Karin asigoo isla markii uu gaaray la tagay hab aad u sareeya.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taariikh Ciyaareedka Andre Ayew
Taariikh Ciyaareedka Yacine Brahimi
Boqorka difaacanaya abaalmarinta ciyaaryahanka Afrika ee sanadkan ee BBC-da, Yacine Brahimi ee u dhashay Algeriya, waxa uu noqonayaa ninka labaad ee keli ah ee difaacda abaalmarintan, marka laga soo gudbo Jay-Jay Okocha.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taariikh Ciyaareedka Yacine Brahimi
Taariikh Ciyaareedka Sadio Mané
Sadio Mané waa suuragal inuusan waxbadan sanadkan 2015ka ku guuleysan, laakiin marka uu goolal dhaliyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Southampton.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taariikh Ciyaareedka Sadio Mané
Taariikh Ciyaareedka Yaya Toure
Riyadii ciyaartooyga u dhashay Ivory Coast una ciyaara Manchester City Yaya Toure ayaa rumoowday 2105 kadib markii u lix jeer ooh ore isku dayey inuu kor u qaado koobka Afrika.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Taariikh Ciyaareedka Yaya Toure
Aubameyang: rekoor cusub ayuu dhigay
16 Nofembar 2015
Sadio Mané wuxuu dhaliyay goolal isu dhaw
Yaya riyadiisii ayuu rumeeyay
Ayew Qarankiisa ayuu udub dhexaad u yahay
Brahimi oo difaacanaya abaalmarintan